नेपालको ३८ जिल्ला पुग्यो कोरोना भाइरस, कुन जिल्लाको अवस्था कस्तो ? — Ratopost.com News from Nepal
नेपालको ३८ जिल्ला पुग्यो कोरोना भाइरस, कुन जिल्लाको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं। ४ महिनामा नेपालको ३८ जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिइसकेको छ ।
नेपालमा माघ ९ गते पहिलोचोटी देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले हालसम्म दुई जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने ३८ जिल्लाका ४०२ जनालाई संक्रमित बनाइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा हालसम्म ३८ जिल्लामा भाइरस संक्रमण देखिइसकेको जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार मात्रै ललितपुर, सिन्धुली, लमजुङ र रामेछाप जिल्लामा पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको छ । ती जिल्लाहरुमा एक–एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
यस्तै काठमाडौंमा तीन जना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या १२ पुगेको छ भने त्यसमा पाँच जना निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ ।
अहिलेसम्म ३७ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । यस्तै दुई जनाको मृत्यु भएको छ । गत २४ घण्टामा २ हजार २४० सहित अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट ३२ हजार ६०४ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ ।
यस्तै गत २४ घण्टामा ५ हजार ८९ सहित अहिलेसम्म ७४ हजार ६४९ वटा आरडिटी परीक्षण भएका छन् । प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार प्रदेश नम्बर–१ मा ९ हजार ४७३, प्रदेश–२ मा ९ हजार २१६, बागमती प्रदेशमा १३ हजार १९७ र गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ९५७ जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ । यस्तै प्रदेश–५ मा ९ हजार ३५३, कर्णाली प्रदेशमा ७ हजार ५९३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार ८७० जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ ।
उपत्यकामा १७ र बाहिर ४४० जना गरी ४५७ जना आइसोलेसनमा छन् । प्रदेश–१ मा ४०, प्रदेश–२ मा १३७ र बागमती प्रदेशमा ७८ (उपत्यका १७ सहित) जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा २, प्रदेश ५ मा १८८, कर्णाली प्रदेशमा एक र सुदूरपश्चिममा ११ जना आइसोलेसनमा छन् ।
अहिले देशभरीका क्वारेन्टाइनमा २१ हजार ६२३ जना छन् । प्रदेश–१ मा एक हजार १७८, प्रदेश–२ मा ३ हजार ४८१, बागमती प्रदेशमा ३३२ र गण्डकीमा ३५९ जना क्वारेन्टिनमा छन् । प्रदेश–५ मा १३ हजार ६३८, कर्णाली प्रदेशमा ६९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ९३६ क्वारेन्टाइनमा छन् ।
सरकारले प्रदेश–२ र ५ का प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरी कम्तिमा १०—१० जना चिकित्सको टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
अब शुल्क तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न सकिने
अहिले देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँग मानिसका बढ्दो संक्रमणले त्रास सिर्जना गरेको छ ।
सरकारलाई कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन माग भइरहे पनि सोंचे अनुसार परीक्षणलाई तीब्र बनाउन सकिरहेको छैन । जसका कारण कोरोना परीक्षण गराउन चाहने सर्वसाधरण सीमित स्वास्थ्य संस्थाको भर पर्न बाध्य छन् । तर, अब शुल्क तिरेर पनि कोरोना भए–नभएको परीक्षण गर्न पाइने भएको छ । कोरोनाको लक्षण नदेखिए पनि अब शूल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न पाइने भएको हो ।
स्वेच्छाले पीसीआर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तोकिएको दररेटमा परीक्षण गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका छन् ।